Disability Rights Ohio - SIYAASADDA CABASHADA HAY’ADDA XUQUUQDA NAAFADA EE OHIO
SIYAASADDA CABASHADA HAY’ADDA XUQUUQDA NAAFADA EE OHIO
Sida loo soo gudbiyo cabasho ku saabsan Hay’adda Xuquuqda Naafada ee Ohio
Haddii aad qabto cabasho, ama aad u maleyso in Hay’adda Xuquuqda Naafada ee Ohio aysan kugula dhaqmin si cadaalad ah, waxaad gudbin kartaa cabasho.
Haddii aad tahay macmiilka Disability Rights Ohio (DRO) ama aad caawimaad waydiisanayso DRO, waxaad xaq u leedahay inaad gudbiso cabasho haddii aadan ku qanacsanayn adeegyada aad helayso. Tusaale ahaan, waxaad gudbin kartaa cabasho haddii aad aaminsan tahay in DRO:
Ku siinin adeegyo waxtar leh
Si khaldan kuugu diideen caawinaad
Aysan raacin siyaasadooda ama habraacooda
Intaa waxaa dheer, haddii aad heshay ama helayso adeegyada caafimaadka maskaxda oo aad dareemeysid in DRO aysan raacin sharciyada ilaalinta federaalka iyo sharciyada u doodista dadka qaba cudurka dhimirka, waxaad gudbin kartaa cabasho. Haddii aad tahay xubin qoyska ka tirsan ama wakiilka qofkaas, waxaad sidoo kale gudbin kartaa cabasho.
Sidee ayay DRO ugu adeegtaa macaamiisha?
DRO waxay caawimaad siisaa qof kasta oo naafo ah oo caawimaad weydiisto. Dhaqaale yar awgiis, mararka qaarkood waxay noqon kartaa gudbin ama jawaab laga bixiyo su’aasha. DRO ma qaban karto qareen ama u-doode ka caawiyo qof kasta dhibaatada ama dhibaatada sharci. Sidaa daraadeed, sannad kasta DRO ayaa go’aamisa qaybaha waaweyn ee dhibaatooyinka ay ka caawin karto. Qaybahan waxaa loo yaqaanaa mudnaanta sanadlaha. Waxaad nuqul ka heli kartaa adoo wacaya xafiiska DRO ama booqanaya boggayaga.
DRO cidna kuma takoorto barnaamijyadeeda, hawlaheeda iyo adeegyadeeda. Waa siyaasadda DRO in ay adeegyo siiso dadka oo dhan iyada oo aan loo eegin jinsiyadda, midabka, diinta, isirka, asal qarameedka, da’da, jinsiga, curyaanimada maskaxda ama jirka, xaaladda guurka, nooca galmada, ka-fadhiisiga aan fiicnayn ee shaqada milatariga, ama xaaladda dhalashada.
Sidee ayaad u gudbin kartaa cabasho ku aadan DRO?
Waad ku soo gudbin kartaa cabashada qoraal ahaan ama taleefonka soddon (30) maalmood gudahooda marka uu dhaco ficilka ama go’aanka aad ka cabaneyso. Haddii aad ubaahan tahay in lagaa caawiyo buuxinta cabashadshaqaale kasta oo ka tirsan DRO ayaa kaa caawin kara hannaankan. Markaad gudbiso cabashada, waxaad u baahan doontaa inaad siiso DRO macluumaadkan:
Magacaaga, cinwaankaaga, iyo lambarka taleefanka ee ay DRO kaala soo xiriiri karto. Ogeysii DRO habka ugu fiican ee lagula soo xiriiri karo. Tusaale ahaan, haddii aad u baahatid daabacaad ama haddii aad doorbidayso iimayl in laguu soo diro, ogeysii DRO.
Haddii cabashadu wakiil uga tahay xubin qoyska ka tirsan, sheeg magaca qofkaas, cinwaanka iyo lambarka telefoonka. Sheeg xiriirka kaala dhaxeeyo qofkaas iyo haddii aad tahay wakiilka sharciga ee qofkaas sida waalidka ilmaha yar ama mas’uulka.
Maxaad u gudbinaysaa cabashada? Maxay qabataa ama aysan qaban DRO? Goorma ayay tani dhacday? Haddii cabashadu ku saabsan tahay sida ay DRO ugu qabato barnaamijyadeeda, sharrax cabashadaada.
Maxaad dooneysaa in DRO ay qabato hadda? Maxaad jeclaan lahayd inaad aragto?
Kamadambeysyo caynkee ah ayay tahay in DRO ogaato wax ku saabsan, gaar ahaan kuwa mustaqbalka dhow ah?
Ku soo gudbi cabashadaada boostada ama telefoonka
614-466-7264 or 1-800-282-9181, dooro ikhtiyaarka 2 ee qaadashada
Wac inta u dhaxeeyso 9 subaxnimo iyo duhurkii ama inta u dhaxeeyso 1 iyo 4 galabnimo. Isniinta ilaa Jimcaha.
Ugu sheeg wicitaan macluumaadka cabashadaada takhasuslaha qaadashada.
Sidee ayaa dib-u-eegis loogu sameynayaa cabashadayda?
DRO waxay isku dayeysaa in ay wax ka qabato cabashooyinka oo dhan ayadoo kala hadlaysa arrimahaaga. Cabashadaada waxay mari doontaa saddex heer oo dib u eegis si loo helo xal:
Cabashada koowaad iwaxaa loo gudbin kormeeraha qofka ku hawlan kiiskaaga. Qofkani wuxuu kaala hadli doonaa sida loo xalliyo cabashadaada wuxuuna baari doonaa cabashadaada. Guud ahaan, qofkani wuxuu go’aan gaari doonaa soddon (30) maalmood gudahood wuxuuna kuugu soo bandhigayaa qoraal ahaan. Haddii aadan ku qanacsaneyn go’aanka, waxaad cabasho gudbin kartaa muddo shan iyo toban (15) maalmood ah adoo adeegsanaya telefoon ama qoraal.
Cabashada labaad waxaa loo gudbin Agaasimaha Fulinta. Marka aad cabato, sharrax waxa aanad go’aanka Kormeeraha u jeclaysan. Agaasimaha Fulinta wuxuu dib u eegi doonaa go’aanka, sababta cabashadaada, wuxuuna go’aan gaari doonaa soddon (30) maalmood gudahood. Waxaad go’aankan ku heli doontaa qoraal ahaan. Haddii aadan ku qanacsaneyn go’aanka Agaasimaha Fulinta, waxaad cabasho gudbin kartaa go’aankan muddo shan iyo toban (15) maalmood gudahood.
Cabashada saddexaad iwaxaa loo gudbin doonaa Guddiga Maamulka. Waxaad ka caban kartaa go’aanka Agaasimaha Fulinta shan iyo toban (15) maalmood adoo adeegsanaya telefoon ama qoraal. Guddiga Maamulka waxay kulmaan bil kasta cabashooyinkana sida caadiga ah dib u eegis ayaa lagu sameyn doonaa kulanka guddiga sida joogto ah loo qorsheeyey ee xiga.
Guddiga Maamulka ayaa laga yaabaa inay tixgeliyaan macluumaadka soo socda ee ku saabsan cabashadaada:
Macluumaadka aad bixisay markii aad soo gudbisay cabashadaada
Isku day kasta oo lagu xallinayo cabashada kormeeraha
Macluumaadka la ogaaday intii lagu jiray baaritaanka cabashada
Macluumaadka aad bixisay markaad cabashada u soo gudbisay Agaasimaha Fulinta
Macluumaad kasta oo aad bixisay marka aad cabashada u soo gubdisay Guddiga Maamulka
Dhammaan shaqsiyaadka ku lugta leh dib-u-eegista cabashadaada waxay ka dhigayaan macluumaadkaaga mid qarsoodi ah.